Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: Baby #332, the second Christmas boy was born at 5:39 AM on 25-12-2013
Baby #332, the second Christmas boy was born at 5:39 AM on 25-12-2013
From Khaung Thlai and Khup Kap Lian, an alive4KG male baby was delivered by Forceps delivery. Under LA, EPI and repair was done. This labor case was recommended byahospital to go for LSCS because of big baby and she came to Yamuna clinic for normal delivery. ၂ဝ၁၃ ခရစ်စမတ်နေ့မှာ မွေးတဲ့ ဒုတိယမြောက်ကလေး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ ဒီဆေးခန်းကို လာမပြဘူးဘူး။ ဆေးရုံတခုကိုသွားတယ် ကလေးထွားလို့ခွဲမွေးဘို့ပြောတာနဲ့ ယမုန်နာဆေးခန်းကိုရောက်လာတယ်။ ရိုးရိုးလမ်းကြောင်းကနေ ညှပ်ဆွဲမွေးပေးရတယ်။ ကလေးအနေအထားက နောက့်စေ့ နောက်ပြုဖြစ်နေလို့ ဒုတိယအဆင့်မှာကြာနေလို့ပါ။ မိခင်ရော ကလေးပါကျန်းမာကြပြီး၊ ဆေးခန်းကတာဝန်ယူသူအားလုံးလဲ တရေးမှ မမှေးရပေမဲ့ ဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်။ ကလေးက ၄ ကေဂျီရှိတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 5:58 AM